China TY230-3 Bulldozer Emeputa na Nweta | Xuanhua
TY230-3 bulldozer bụ kwụsịtụrụ isiike, na-enyefe hydraulic, ụdị ụgbọelu na-achịkwa hydraulic. Mbara ala, nnyefe ikike nnyefe nke bụ Unilever arụ ọrụ. Sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ dịka mmadụ na igwe na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi. Ike ike, arụmọrụ magburu onwe ya, arụmọrụ arụmọrụ dị elu na nlele anya na-egosi atụmatụ uru. Nhọrọ gụnyere U-agụba (Ike 8.1m), akara aka shank, ROPS na akụrụngwa ndị ọzọ. Ọ bụ nhọrọ gị kachasị mma maka ụlọ n'okporo ụzọ, mmiri hydro-electric, mgbanwe mpaghara, ụlọ ọdụ ụgbọ mmiri, mmepe m na ihe ndị ọzọ.